११ महिने बालकको सफल कलेजो प्रत्यारोपण – Digital Khabar
११ महिने बालकको सफल कलेजो प्रत्यारोपण
०१ चैत, काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक ११ महिने बालकको सफल कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको छ । शिक्षण अस्पतालका प्रत्यारोपणविद डा. रमेशसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा ११ वर्षिय बालककाे कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको हो । बालकलाई ३५ वर्षिय बाबुले कलेजो दान गर्नुभएको हो । अहिले प्रत्यारोपण गर्ने बच्चा र कलेजो दिने बाबुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ । डा. भण्डारीका अनुसार अहिले बालकलाई कलेजो दिने बाबुलाई आईसीयुमा राखिएको छ । भण्डारीसहित ६० जनाको टोलीले कलेजो प्रत्यारोपण गरेको हो ।
सरकारको नेतृत्व गर्न तयार छु : देउवा
चंखेली गाउँपालिकामा फोन गर्न डाँडामाथि रुखका टुप्पामा चढ्नुपर्ने !